China 2020 ifektri ebusika abadala yangaphandle amatende idada / ihansi phansi isikhwama sokulala ifektri nabakhiqizi | Xueruisha
2020 ifektri ebusika umuntu omdala ongaphandle wekhempu idada / ihansi phansi isitolo sokulala esikhwameni
Lesi sikhwama sokulala phansi senziwe ngendwangu ye-nylon engenamanzi engu-20D 400T, engangeni manzi futhi edabulayo, ethokomele ukuphatha, enobungani besikhumba futhi enobungani bemvelo. Ingakwazi ukugcina ukushisa ngempumelelo, inciphise ukusabalalisa ukushisa, ivimbele ukungena kwamakhaza emoyeni, futhi inekhono elithile lokulwa namagciwane, ikwenze kuhlanzeke futhi kunempilo ekusetshenzisweni kwansuku zonke.
Lesi sikhwama sokulala phansi senziwe ngendwangu ye-nylon engenamanzi engu-20D 400T, engangeni manzi futhi edabulayo, ethokomele ukuphatha, enobungani besikhumba futhi enobungani bemvelo. Ingakwazi ukugcina ukushisa ngempumelelo, inciphise ukusabalalisa ukushisa, ivimbele ukungena kwamakhaza emoyeni, futhi inekhono elithile lokulwa namagciwane, ikwenze kuhlanzeke futhi kunempilo ekusetshenzisweni kwansuku zonke. Izinto zokugcwalisa zingama-90% idada elimhlophe elisezingeni eliphansi, ngeFill Power ka-650+ kanye nesisindo sokugcwalisa esingu-600g, okunganikeza ukufudumala okuphezulu nokuvikelwa emakhazeni ngaphandle kokwandisa isisindo, kuchaze kabusha umbono womsebenzisi wobudlelwano phakathi kokugcwalisa isisindo nemfudumalo. Okubaluleke kakhulu, lolu hlobo lwedada phansi lunokumelana namanzi okuhle kakhulu, futhi linezinga eliphakeme lokushisa, elingahlala liqinile kwisitoreji sokushisa. Lesi sikhwama sokulala singenye yezinto ezithengisa kakhulu ngaphandle emakethe, futhi futhi siwuhlobo oluthandwayo olunomumo woMama. Ukwakhiwa kwangaphakathi kwalesi sikhwama sokulala kuklanywe ngokukhethekile yithi. Njengokuthi sisebenzisa i-3D (ntathu ntathu) ulayini oqondile nebhokisi lezinyawo, elingakugwema ngempumelelo ukungalingani phansi kwesiteshi ngasinye phansi ngemuva kokuthi isikhwama sokulala sisetshenziswe isikhathi esithile esizothinta ukusebenza kokugcina imfudumalo. Ibhande eligcwele lokujiya komoya lingavimbela ubuningi bokuvuza kokushisa ngoziphu. Futhi ukwakheka kwekhola lentamo kuzokuvumela ukuthi ulale ngokunethezeka ngaphandle kokukhathazeka ngokulahleka kokushisa okuvela ngemuva kwentamo yakho. Ngaphandle kwehodhi elijiyile lenzelwe u-U ngenduduzo nemfudumalo, intambo yeHood shrink, iFlap Velcro nokunye ukwakheka okuyinkimbinkimbi konke kungokwemfudumalo esele esikhwameni sokulala. Akunandaba ukuthi uyaphi, futhi noma ngabe wenzani, sethemba ngokuqinile ukuthi lesi sikhwama sokulala senzelwe wena ngokukhethekile. Ucabangani? Noma ukhathazeke ngani? Uma unokungabaza, sicela ungangabazi ukusazisa. Abasebenzi bethu abaqeqeshiwe bazoxazulula inkinga yakho futhi bakwenzele isixazululo ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Khetha ukufudumala kwesikhwama sokulala (induduzo)
1. Linganisa izinga lokushisa ozokhempa ngaphansi kwalo. Yize leli nani lihluka ngezikhathi zonyaka nesimo sezulu, ezimweni eziningi, izimo zokulala zabathandi bokuhamba abajwayelekile ziphakathi kuka-7℃ nangaphezulu kuka-zero 7 ℃.
2. Lungisa ukushisa okulinganiselwe okungenhla ngokuya ngokuthanda kwakho kanye nesimo esithile ongahle ubhekane naso.
3. Ngokuya ngenani lokushisa elilungisiwe, bheka imfudumalo (induduzo) enikezwe umenzi ukukhetha isikhwama sokulala. Kumele kuqashelwe ukuthi njengoba izindinganiso zabakhiqizi abahlukahlukene zingafani, amanani ahlinzekwa ngabakhiqizi ayisethenjwa kuphela, awasebenzi ngokuphelele kunoma yisiphi isimo.
Langaphambilini I-2020 entsha yomkhiqizi wokukhanya okhanyayo okunethezeka kwedada elipakishwayo phansi kwesikhwama sokulala
Olandelayo: Umkhiqizi we-2020 ophakeme u-90% izikhwama zokulala ezigcwalisiwe ngenani lokuncintisana
2020 nomkhiqizi ephakeme 90% phansi slee wagcwalisa ...
Sifihle igobolondo manzi rip-stop m ephathekayo ...